Momba anay - FUJIAN YUANHUA PUMP INDUSTRY CO., LTD
Studio famolavolana izay mino ny herin'ny famolavolana lehibe izahay.
FUJIAN YUANHUA PUMP INDUSTRY CO., LTD natsangana tao Fujian tamin'ny 2009, izay sampana iray an'ny PEAKTOP Group voatanisa ao Hong Kong (kaody stock SEHK: HK0925). Niorina tamin'ny 1991 ny vondrona PEAKTOP, ny ankamaroany dia ny fanomezana sy ny asa an-trano.
Na izany aza, ny sampana-YUANHUA dia mirotsaka amin'ny fikarohana sy fampivelarana, famokarana ary fivarotana angovo azo entina anaty rano AC, paompin-drano DC, paompy ao anaty rano tsy misy brush sns. fiara, mandeha ho azy fitaovana mivezivezy rano, vokatra avy amin'ny masoandro (loharano fandroana vorona), fiara fitaterana trondro aquarium, kojakoja fandroana tongotra, rivotra mangatsiaka kokoa. Ankoatr'izay dia manampy vokatra vaovao izahay toy ny pump pump ho an'ny milina fanasan-damba sy ny paompy RO ho an'ny fanadiovana rano.
Nahazo fanamarinana ny rafitra fitantanana kalitao ISO9001: 2008 ny orinasanay ary manaraka tsara ity rafitra mpitantana ity. Ny vokatra dia nankatoavin'ny CCC, ETL, UL, CUL, CE / GS, ROHS, SAA sns izay afaka mamaly ny fangatahan'ny ankamaroan'ny firenena manerantany. Nametraka fifandraisana maharitra sy maharitra amin'ny orinasa lehibe sasany izahay.
Manana marika roa "PEAKTOP" sy "YUANHUA" izahay ho an'ny paompy rendrika. Manana traikefa efa ho 20 taona sy kalitao tena tsara izahay, manana ny lazanay eo amin'ny sehatra izahay. Izahay ihany koa dia voatondro mpamatsy vokatra ny paompy rendrika ny ankamaroan'ny rojo fivarotana lehibe any ivelany. Miaraka amin'ny fitsipiky ny "Kalitao aloha, ny mpanjifa aloha", dia mahazo tambiny sy trosa tsara indrindra foana izahay any ivelany sy any an-trano.
Mba hampivelarana hatrany ny tsena iraisam-pirenena vaovao dia nandray anjara tamin'ny Canton Fair izahay isan-taona ary indraindray tamin'ny Global Source Hong Kong Electronics Show. Ento ny vokatra vaovaon'ny orinasa amin'ny fifandraisana mivantana amin'ny mpanjifa vaovao sy taloha any ivelany, henoy ny hevitry ny mpanjifa sy ny tolo-kevitr'izy ireo ary hatsarao hatrany ireo vokatra. Ny fahafaham-pon'ny mpanjifa no tanjon'ny serivisinay.
Ankoatr'izay, mba hampanan-karena ny fotoana malalaka sy ny fiadanan'ny mpiasa dia manome fanomezana fitsingerenan'ny andro nahaterahana sy fety mifanentana amin'ny tsingerintaona nahaterahan'ny mpiasa tsirairay ny orinasanay. Ny orinasa Yuanhua dia mandeha any amin'ny toerana fizahan-tany sasantsasany hitety 2-3 isan-taona. Alohan'ny Fetin'ny Lohataona dia misy fiaraha-misakafo marobe sy loteria isan-taona, ary hetsika fankasitrahana sy valiny isan-taona ihany koa hanehoana ny taom-piasana manontolo amin'ny mpiasan'ny orinasa.
Manana traikefa efa ho 20 taona sy kalitao tena tsara izahay, manana ny lazanay eo amin'ny sehatra izahay.
- Ny kalitao aloha, ny mpanjifa aloha